TP-Link CPE to CPE connection to share Internet (2.4 GHz) - အောင်အောင်ဆွေ Blog
TP-Link CPE to CPE connection to share Internet (2.4 GHz)
ဆိုကြပါစို့.. သင့်မှာ RedLink (သို့ ) ADSL နဲ့ အခြား ISP တစ်ခုခုကနေ အင်တာနက် လိုင်းရထားတယ် ဆိုပါစို့ ..
ဒါဆိုရင် သင့်မှာ Router တစ်လုံးသေချာပေါက်ရှိနေပါလိမ့်မယ် .. သင်သုံးနေတဲ့ Wifi ဟာ အဲဒီ့ Router ကလွှင့်ထားတာ ဖြစ်သလို .. Desktop PC မှာ သုံးထားတဲ့ အင်တာနက်လိုင်းကလဲ အဲဒီ့ Router ကလာတဲ့ကြိုးကြောင့်ပါ .. ထားပါတော့ သင်က အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် အဲဒီ့ အင်တာနက်လိုင်းကို ရပ်ကွက်ထဲက အိမ်တစ်အိမ် ကို Share ချင်တယ်ဆိုလာပြီဆိုရင်တော့ ..
သင်ဟာ OutDoor CPE ကို မဖြစ်မနေသုံးရပါတော့မယ် .. CPE ဟာ Wifi တွေ Range မမှီနိုင်တဲ့ နေရာတွေကို Straight နည်းနဲ့ ခပ်ဝေးဝေးချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ် .. Wifi တွေဟာ ၃၆၀ံမိနိုင်ပေမယ့် CPE ကတော့ ၁၂၀ံပဲမိနိုင်ပါတယ် .. သီအိုရီအရတော့ ကီလိုမီတာ ၅၀ ကျော်အထိမိနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် .. ဘာအတားအဆီး အနှောင့်အယှက်မှ မရှိရင်ပေါ့လေ ..
ကျွန်တော် ပြောမှာက သင့်ရဲ့ Router က အင်တာနက်လိုင်းကို CPE ကတစ်ဆင့် နောက်တစ်နေရာက ကွန်ပြူတာတစ်ခုကို Share တဲ့ Setting နဲ့ အယူအဆကိုပါ .. အခု Device ကတော့ TP-Link (2.4 Ghz) CPE ပါ.
(၁) လွှင့်မဲ့ CPE ကိုအပေါ်ကပုံအတိုင်းကြိုးထိုးလိုက်ပါ .. PC မှာအရင်ထိုးပြီး Setting ချပါမယ် ..
PC ရဲ့ IP ကို 192.168.1.10 လို့ ပေးလိုက်ပါ .. CPE ရဲ့ Default IP က 192.168.1.254 ပါ .. (Setting တွေကို Factory Default ပြန်ချချင်ရင် CPE ရဲ့ Network ပေါက်ဘေးက အပေါက်လေးကို ၁၀ စက္ကန့် လောက်ဖိထားပါ)
PC ကို IP ပေးပြီးရင် CPE ရဲ့ Lan ကြိုးကို PC မှာလာချိတ်ပါ .. မိသွားရင် Browser(Mozilla/IE) မှာ 192.168.1.254 လို့ ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်လိုက်ပါ ..
UserName နဲ့ Password တောင်းပါမယ် .. နှစ်ခုစလုံးမှာ admin လို့ ရိုက်ပြီးဝင်လိုက်ပါ ..
(၂) CPE Page ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင် ဘယ်ဘက်အခြမ်းထဲက Quick Setup ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ .. AP Mode ကိုဆက်ရွေးပါ .. နာမည်ကို ကိုယ်ကြိုက်တာပေးပြီး Finish လုပ်လိုက်ပါ .. CPE Reboot လုပ်နေတာ ခဏစောင့်ပါ ...
(၃) ပြီးရင်တော့ LAN ကို IP ပေးပါ .. Router ရဲ့ IP Range အတွင်းကိုဝင်အောင်(မိအောင်) ပေးရပါမယ် .. ဥပမာ Router IP က 192.168.0.1 ဆိုရင် CPE ကို 192.168.0.254 လောက်ပေးလိုက်ပါ .. Subnet Mask ကို 255.255.255.0 ထားပါ .. Default Gateway ကို Router ရဲ့ IP ကိုပေးလိုက်ပါ ။
(IP ပြောင်းလိုက်ရင် ပြောင်းလိုက်တဲ့ IP ကို Browser မှာ ထပ်ရိုက်ခေါ်ပါ)
(၄) ပြီးရင်တော့ Wireless Security ထဲသွားပြီး WPA2/Personal နဲ့Encryption မှာ TKIP ကိုရွေးပြီး Password တစ်ခုပေးလိုက်ပါ .. ဥပမာ (wertyui$^%*1213) နောက်ပြီး System Tools ထဲက Password ထဲဝင်ပြီး Router ရဲ့ Name နဲ့ Password ကိုပါ .. ကိုယ်ကြိုက်တာပြောင်းလိုက်ပါ .. ဒါဆိုရင်တော့ လွှင့်မယ့်တစ်ဖက်ခြမ်းကို AP ကို အောင်မြင်စွာ ထောင်လိုက်နိုင်ပါပြီ .. (အော် မေ့လို့ Wireless Mode ထဲမှာ AP Mode မှာ SSID Broadcast ဆိုတာကို အမှန်ခြစ်ခဲ့ရင် PC တွေကပါ CPE လိုင်းကိုဖမ်းနိုင်ပါတယ် ၊ SSID ကို အမှန်မခြစ်ခဲ့ရင် တော့ CPE အချင်းချင်းသာ ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်) ပြီးရင်တော့ PC မှာထိုးထားတဲ့ LAN ကြိုးကို Router မှာ ထိုးထည့်ခဲ့ပါ ..
နောက် Client AP လုပ်မဲ့ CPE ကို ထပ်ပြီး Configure လုပ်ပါမယ် .. CPE တွေကို Configure အရင်မလုပ်ပဲ တပ်ဆင်ပြီးမှ အထိုင်ချပြီးမှ Configure လုပ်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ် သင့်ပါတယ် .. မျက်နှာချင်းဆိုင်ထားပြီး စမ်းသပ်ပြီးမှ တပ်ဆင်တာ စိတ်အချရဆုံးပါပဲ .. နောက်တစ်လုံးကို ပုံကအတိုင်း PC မှာလာရောက်တပ်ဆင်လိုက်ပါ .. IP Range ချင်းတူအောင်ချိတ်ပြီး CPE ရဲ့ Defaut IP ကို Browser မှာ အရင်အလုံးအတိုင်းထပ်ခေါ်လိုက်ပါ .. ရလာပြီဆိုရင် ..
(၁) Lan ထဲကိုသွားပြီး IP ကို အရှေ့မှာပေးခဲ့တဲ့ IP တွေနဲ့ လုံးဝ မ၀င်အောင်ပေးလိုက်ပါ .. ဥပမာ 50.50.50.1 subnet ကို 255.255.255.0 , Default Gateway ကို 50.50.50.1 (၂) ပြီးရင် Wireless Setting ထဲက Wireless Mode ထဲကနေ ဟိုးအောက်ကိုဆင်းသွားပြီး .. survey ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ .. စောစောက CPE ကိုပေးထားတဲ့ Wireless ကို ရှာပါ .. တွေ့ ပြီဆိုရင် Copy လုပ်လိုက်ပါ .. (၃) Quick Setup ထဲဝင်ပါ .. AP Client ကိုရွေးပါ .. WAN IP ကို Static ထားပါ .. IP = စောစောက Router IP နဲ့ Range ၀င်အောင်ပေးပါ . ဥပမာ 192.168.0.11
Default Gateway က = Router IP ပါ ..
DNS မှာ ၁ ကို Router IP ပေးပါ. ၂ ကို လွှင့်ထားတဲ့ CPE ရဲ့ IP ပေးပါ ..
ပြီးရင်တော့ AP နာမည်တောင်းပါမယ် စောစောက Copy လုပ်ထားတာကို Paste ချလိုက်ပြီး .. Finish လုပ်ပါ ..
(၄) ပြီးရင် Wireless Security ထဲဝင်ပြီး လွှင့်ထားတဲ့ CPE ကို ပေးထားတဲ့ Wireless Password ကိုတူအောင်ရိုက်ထည့်ပေးပါ ..
ဒါဆိုရင်တော့ သင့် ဖမ်းတဲ့ CPE မှာ Signal တွေတက်လာပြီး .. PC မှာ လဲ Internet Access ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ...